Ngezansi Flat, Chona - St Peter Port - I-Airbnb
Ngezansi Flat, Chona - St Peter Port
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Frank & Christine
U-Frank & Christine Ungumbungazi ovelele
Ilungiswe ngokugcwele entwasahlobo ka-2018 futhi ifakwe ngezinga eliphakeme kuhlanganise nomabonakude. Amashidi namathawula anikeziwe. Isendaweni eqhele ngebanga lokuhanjwa ngezinyawo ukusuka edolobheni kanye nasemzileni webhasi.
Bheka ikhasi lethu le-Facebook elithi 'Self Catering Guernsey - Chona Apartments'
I-Chona ilala abantu abangaba ngu-2 ekamelweni elilodwa elilala abantu ababili elinekamelo lokuphumula elintofontofo/i-diner nekhishi lesimanje elinakho konke okudingekayo. Ifulethi lethu lisendaweni ekahle yesikhungo se-St Peter Port Town futhi liqhele ngemizizi engu-5 kuphela ukuya e-Beau Sejour Sports & Leisure Centre enendawo yokubhukuda enamanzi ashisisiwe esendlini, ikamelo lezempilo & indawo yokuzivocavoca.
i-St Peter Port 's centerpiece isonto layo elihle, okukholelwa ukuthi liyisonto eliseduze kakhulu ne-pub e-British Isles. Phezulu edolobheni kukhona i-Candie Gardens eyayikade ingadi esemthethweni yekhaya langasese, manje elivulekela umphakathi. I-St Peter Port inokuningi ongakwenza futhi ukubone ngezitolo ze-boutique, izingadi ezinhle nomlando omningi.
Ibungazwe ngu-Frank & Christine
UFrank & Christine Ungumbungazi ovelele